Abaaraha Yurub - Nidaamka Baradhada
в Yurub, Ecology
In kasta oo adduunka oo dhan uu la dagaallamayo coronavirus, Yurub ayaa wajaheysa khatar dheeri ah. Abaarta daran awgeed, dalaggu way dhimanayaan, ma jiraan wax lagu quudiyo xoolaha, beeraleydu way burbureen, webiyadii ugu weynaana waxay noqdeen kuwo aan qoto-dheer oo aan ku habooneyn bad-qabka, sidaa darteedna u raridda alaabada. Cawaaqibta musiibada hadda jirta waxay dhaafi kartaa rikoorkii anti-rikoorka loo dhigay laba sano ka hor, kaas oo sii kululaan doona dhaqaalaha Yurub iyo adduunka - wuxuu wajahayaa khasaaro balaayiin dollar ah.
Sida laga soo xigtay mail.ru, laba sano ka hor, saadaaliyayaasha Yurub iyo beeraleyda ayaa qaylo-dhaan ka sameystay: kii ugu horreeyay ayaa duubay heerkulka ugu sarreeya sannado badan oo indho indhayn ah, kan dambe wuxuu lumiyay goosashooyinkoodii oo aan hore loo arag. Cimilada diiran ee duuban ayaa xitaa ka jirta Scandinavia iyo waddamada ku xiga: gobollada dalka politijiyada Norwey waxay gaadhay + 33,5 °. Kuleylka aan caadiga ahayn awgood, dhirtu waa laga reebay qoyaankii loo baahnaa, waxsoosaarkii dalagyada qaar ayaa hoos u dhacay halmar hal mar. Xitaa soosaarayaasha chips, oo ku haray iyada oo aan haysan sheyga ugu weyn ee cayriin - baradho, ayaa welwelsanaa. Warshadaha quwadda tamarta ayaa sidoo kale ku dhibaatoobay, kaas oo korantada dalal badan, si nidaamsan u xireysa geedaha tamarta nukliyeerka, ay ku xiran tahay. Intaa waxaa sii dheer, mas'uuliyiinta Midowga Yurub iyo xubnaheeda shaqsiyaadka ah waxay ku qasbanaadeen inay siiyaan kaabayaal aad u ballaaran beeraleyda iyo shirkadaha ay saameysey si ay u sii noolaadaan oo ayna kor ugu kicin qiimaha waxyaabaha aasaasiga ah. Ku guuleystayaashu waxay ahaayeen kaliya soosaarayaasha unugyada qoraxda iyo iibiyayaasha hay, taas oo dalabka si aad ah kor ugu kacday sababtoo ah xaqiiqda ah inaysan jirin caws cusub oo ku filan oo lagu quudiyo xoolo fara badan.
Isla waqtigaas, xaaladaha cimilada ayaa si aad ah loogu qaybiyey si aan sinnayn. In kasta oo woqooyiga iyo badhtamaha Yurub ay ku xanuunsanayeen kulaylka, koonfurta waxa ku dhacay roobab diirran, kuwaas oo qayb ahaan u magdhabay abaarta daran. Mar horeba xilligii deyrta, roobab badan ayaa ku dhacay inta badan qaaradda, daadadna waxay ka dheceen gobollada qaar. Khubaradu ma ay fahmin sababihii dhacay. Sanadka 2019, heerkul aad u sareeya ayaa mar kale la garaacay, laakiin ma jirin abaar weyn, sidaa darteed argagaxii hore waa laga fogaaday.
Xagaagan, cawaaqibka dadka iyo dhaqaaluhuba way sii xumaan karaan. Shaqaalaha Adeegga Isbeddelka Cimilada Yurub ee Copernicus ayaa saadaalinaya khasaaraha isku-darka warshadaha kala duwan - ugu horreyn beero - balaayiin dollar. Marka loo eego xisaabinta ay ku leeyihiin Bartamaha iyo Galbeedka Yurub, marka loo eego natiijooyinka saddex bilood ee xagaaga, roobabku waxay hoos u dhici doonaan 40% wax ka yar sidii caadiga ahayd, taasoo noqon doonta kharashyo dheeri ah oo miisaaniyadeed oo horey loogu qasbay inay si firfircoon u isticmaalaan sababta oo ah coronavirus-ka gobollada.
Si kastaba ha noqotee, xitaa qaab aan horay loo arag marka loo eego mugga, duritaanka maaliyadeed kama hortagi karto musiibo kale oo dabiici ah. Rhine, webiga ugu weyn Jarmalka iyo midka ugu dheer Yurub, wuxuu bilaabay inuu qallajiyo Abriil - heerka biyuhu ma uusan hooseynin 9-kii sano ee la soo dhaafay. Bishii oo dhan, kaliya 5% roobabka caadiga ah ayaa ka da'ay dalka, taas oo ahayd tilmaameyaashii ugu xumaa tan iyo 1881. Saadaasha cilmiga saadaasha hawada waxay rajeynayaan roobab, laakiin ilaa iyo hada waa ay cimri gaaban yihiin.
Dhibaatadu waxay khuseysaa gobolada kale sidoo kale. Czech Republic ayaa wajahaysa abaartii ugu xumeyd taariikhda casriga ah, xaaladdeedana waxaa uga sii daraya heerka ay ku sugan yihiin dhul ahaan. Wasiirka deegaanka Jiří Brabec wuxuu abaarta ugu yeeray caqabad ka sii culus tan coronavirus, taasoo wadanka ka dhigtay midkii ugu horreeyay ee midowga yurub gebi ahaanba xira xuduudeeda. 80% ilaha biyaha dhulka hoostiisa ayay saameeyeen.
France gudaheeda, ku dhawaad ​​kalabar dhamaan dhul beereedku way engegeen; Roomaaniya, kaydadka kaydka ayaa si ba'an loo jebiyey. Meel u dhaw Swiss Geneva bilowga guga, roob ayaa la filayay bil iyo badh, oo aan dhicin wax ka badan 100 sano. Dabayaaqadii 2018, qaar ka mid ah saynisyahannada ayaa sheegay in sababta dhimashadu ay tahay kororka cimilada, kaasoo ka sii badanayay Yurub badidood dhowr bilood. Waxay sameysay "haamo kuleyl" dhulka korkiisa waxayna ka hortagtay roobab. Sida ifafaale kale oo cimilo maalmeedkeenna maanta jira, waxaa sababay isbedelka cimilada ee "aadanaha".
In kasta oo wax walba la sixi karo, laakiin ficilku waa in si dhakhso leh wax looga qabtaa. Tallaabada ugu horreysa ayaa ah in la yareeyo qiiqa kaarboonka ah jawiga, sida lagu qeexay heshiiskii Paris ee 2015. Kuma soo rogo waajibaadka gaarka ah Dowladaha kaqeyb galaya, laakiin waxay qortaa in si madax banaan loo sameeyo loona hirgaliyo barnaamij ficil. Ujeeddada guud ee kama dambaysta ahi waa in la hubiyo in 2100 celceliska heerkulka sannadlaha ah ee Dunidu aanu kor u kicin wax ka badan 2 ° C marka la barbar dhigo tilmaamayaasha waagii ka horeeyey warshadaha (1850-1900s). Mareykanka, Shiinaha, Hindiya iyo Ruushka ayaa hadda soo saaraya qiiqa ugu badan. Isha ugu weyn ee kaarboon (ama kaarboonka) raadkeeda waa wax soo saar warshadeed, kaas oo gubta shidaal aad u badan, iyo duulista.
Tags: kuleylka aan caadiga ahaynabaarta Yurubdhibaatooyinka deegaanka
Russia waxay sii wadaysaa inay siiso baradhada Moldova
IFA: Suuqa baradho ee Ireland isma beddelin, abaarta ayaa ka walwalsan Yurub oo dhan
Mas'uuliyiinta gobolka Astrakhan waxay ku wareejin doonaan maalgashadayaasha dhul ballaaran oo dhul aan lahayn
Turkmenistan ayaa Ruushka ka iibsan doonta 14 kun oo tan oo baradho abuur ah
26 nooc oo baradho ah ayaa sanadkan lagu beeray dhulka 'Krasnoyarsk Territory'
Magaalada Primorye, waxay yareysey mugga khudradda kordheysa shaqo la’aan darteed